छात्रालाई यौनदुर्व्यवहार गर्ने तिमी गुरू कि गोरू?
‘ए नानी यता आउ त, आउ अलि नजिक आउ न , आउ न काखमा बस न भन्या’
नानी मुन्टो निहुँराउँदै अप्ठ्यारो मानेर सजिलै जादिनन्। उसलाई थाहा भइसक्यो कि त्यो काख उसको लागि सुरक्षित छैन । ऊ डराउँछ, जान मान्दैन तर पनि जर्बरजस्ती शिक्षकले उसको हात समाउँछ अनि भन्छ “किन डराएकी, आउन न, म पनि तिम्रो बुबा जस्तै त हो नि, म तिमीलाई केही गर्दिन आउ।’
तिमी मेरी छोरी जस्तै म तिम्रो बाउ जस्तै भन्दै शिक्षकले आफ्नो छात्रालाई काखमा राख्छ, गाला मसार्दै किस गर्छ, अंगालो मार्छ, स्तन सुमसुमाउँछ, गुप्ताङ्गमा हात लादै थिच्छ र जब विद्यार्थी डराएर आफ्नो आमाबुबालाई भन्छ अनि मिडिया र उसको अभिभावकले उसको मर्यादामा प्रश्न गर्दा नैतिकताको पाठ पढाउने गुरुले भन्नुहुन्छ , यो त सामान्य हो नि छोरी सम्झेर माया गरेको, खै नानीहरुले कस्तो सोच्यो ? गुरूसँग त कस्तो क्रियाक्रलाप राम्रो कस्तो नराम्रो भनेर छुट्टाउने क्षमता हुन्छ, छोरीचेलीछात्राहरुको स्वास्नी र गर्लफ्रेण्ड भन्दा फरक परिचय हुन्छ भन्ने चेतना हुन्छ , समाजमा घटिरहेका यस्तो अनैतिक घटनाहरुको विरुद्धमा लाग्ने साहस हुन्छ न कि आफूनै घृणित काम गदै हिड्ने ?
जब गुरुहरुले नै जनावर जस्तो क्रियाकलाप गदै हिड्छन् भने उनीहरुलाई गुरु होइन कि गोरु भनेर बोलाउन थाल्छन् उनका विद्यार्थीहरु र पछिसम्म पनि यही नामले सम्झन्छन् । एउटा अस्वथ्य र यौनपिपासुको मनोरोग लागेको शिक्षको स्वभावले शिक्षक पेशा र राम्रा शिक्षकहरुप्रति पनि प्रश्न चिन्ह गर्न बाध्य बनाउँछ। एउटा शिक्षकबाट यौनशोषणमा परेकी छात्राको मानसिक अवस्था कस्तो होला, उसले के फेरि अर्को शिक्षकलाई विश्वास गर्न सक्छिन् , के उनी खुलेर फेरि अर्को शिक्षकसँग हाँस्न सक्छिन्, उनी हाँस्नुभन्दा पहिले दशपटक सोच्छिन् । उनी अन्य शिक्षकको अगाडि जान डराउँछिन् , स्कूल जान मान्दिनन्, डर र त्रासमा आफ्नो उमेर बढाइरहेकी हुन्छिन् । यही हो एउटा गुरुले दिएको गुरुदक्षिणा ? के उनले स्कूलबाट पाएको शिक्षा यही हो ?
‘छात्राहरुलाई यौनदुव्र्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक गिरफ्तार’ कहिले महोत्तरीको शिक्षक पक्राउ, कहिले काठमाडौँको , कहिले धनुषा, कहिले गुल्मी त कहिले कुन जिल्लाको शिक्षकहरु पक्राउ ।समाचार पढ्दै गयो ६ वर्षकी बालिका बलात्कृत हुन्छिन् , ११ वर्षको नानी बलात्कारबाट गर्भवती हुन्छिन् , १० वर्षको नानीलाई जर्वजस्ती वेश्यालयमा यौनकर्मी बनाउन प्रेरित गर्छ र यी सबै गर्ने आफ्नै बाबु , आफ्नै आफन्त र आफ्नै शिक्षक भइँदिदा समाजले कसरी स्वथ्य श्वास फेर्न सक्छ ? एउटा शिक्षकले आफ्नो यौन चाहना मेटाउन आफ्नो विद्यार्थीलाई बलीको बोका बनाउँछन् भने यो कतिको जायज कुरा हो ? पढाउन छोडेर विद्यार्थीको ढाड सुम्सुमाउन जाने, कस्तो रंगको अन्डरवेयर लगाएको छ भनेर निहुँरेर हेर्ने, स्तनमा चिमोट्ने, गुप्ताङ्गमा सुमसुमाउने , यस्तो खालको क्रियाकलाप गर्नेलाई तिनीहरुको हातनै काट्ने सजाय दिँदा पनि फरक पर्दैन । के बालबालिकाहरु तीनिहरुको यौन प्यास मेटाउने खेलौना हो ?
अस्ति बुबाको मुख हेर्ने दिन एउटा छोरीले आफ्नो बाउको बारेर्मा मेरो ड्याडी मेरो भगवान हो र मलाई ड्याडीको छोरी हुनुमा गर्व लाग्छ’ भनेर एउटा फेशबुकमा फोटो राखेको थियो । एउटा दिदीले उत्तिनैखेर लेखिहाल्नुभयो, “तिम्रो भगवान जस्तो बाबुले तिम्रो कहिल्यौ चित्त नदुखाहोस् भनेर” । उनले पनि हासेको इमोजि राखेर रिप्लाई दिइन् ‘थ्याङ्कु अन्टी’। उहाँहरुको पाइबेशीको इज्जत गर्दै म उहाँहरुको सही परिवार, उहाँको नाम र घटना भएको जिल्ला पनि भन्न चाहन्न् । दिदीकोे कमेन्टमा मैले उनको बुबाको लागि एउटा गतिलो झापड भेटेको थिए । त्यो व्याङ्ग्यात्मक कमेन्टमा दिदीको आक्रोस र रिस मैले राम्ररी बुझेको थिए । ती नानीलाई के थाहा सात वर्षअगाडि गाउँमा के भएको थियो भनेर । सायद उसलाई थाहा पनि भएन होला । त्यतिखेर उनी काठमाडौँमा सानीमाको घरमा बसेर पढ्थिन् रे । यदि उनलाई यो कुरा थाहा पाउने हो भने मलाई एउटा प्रश्न उठ्यो के अर्को साल फेरि बुबाको मुख हेर्ने दिर्न मेरो ड्याडी मेरो भगवान हो र मलाई ड्याडीको छोरी हुनुमा गर्व लाग्छ’ भनेर लेख्न सक्लिन् त ?
यो घटना त्यस्तै सात वर्ष अघिको हो । त्यस्तै साँझको ५ बजेको थियो होला, मेरो होस्टेलको एकजना दिदीले मलाई एउटा अनौठो घटना सुनाउनुभयो र नयाँ बानेश्वरको एउटा क्लिनिकमा जाऔँ न भनेर आग्रह पनि गर्नुभयो । हिडेर पन्ध्र मिनेट लाग्ने ठाउँमा पनि हामी ट्याम्पो चढेर गएका थियौ । कसैलाई पनि नभन्ने सर्तमा दिदीको कुरा थियो – उहाँको गाउँमा उहाँको काका पर्नेले उहाँको मामा पर्नेको छोरीलाई पेट बोकाएछ अनि त्यो पेटको बच्चा फाल्न केटीलाई काठमाडौँ ल्याएको रहेछ । त्यो केटीलाई केटीको आमा र दिदीको भाउजूले लिएर आएको रहेछन् । हामी क्लिनीक पुग्यौ तर उहाँहरु नजिकको चिया पसलमा खाजा खान जानुभएको रहेछ । हामीपनि त्यतै गयौँ । रातो कुर्ता, दुई चुल्ठा बाटेकी ती नानी चना र अण्डा कोकसँग पिइरहेकी थिइन् । हामीलाई देख्ने वित्तिक्कै अलि लजाउँदै उनी हाँसिन् । दिदीले केही नथाहा पाए जसरी सोध्नुभयो ‘कान्छी सन्चै छेस्, ल तँलाई काठमाडौँमा स्वागत छ’ उनले केही प्रतिक्रिया दिइनन् निच्च हाँस्दै कोक खाइन् । लामो बाटो भएर आएका भएर होला सबै थकित देखिन्थे । उनकी आमा उनलाई हेर्दै आँखाभरी आँसु बनाइरहेकी थिए ।
दिदीको भाउजूले ‘माइजु एकछिन ल नानीहरुसँग एउटा कुरा गर्नुछ’ भनेर निस्कनुभयो । दिदीले हत्तनपत्त के हो यो भाउजू, आमाले फोन गरेर भन्दा पो म त छक्क परेको , त्यो काका त त्यस्तो थियो जस्तो लाग्थेन ?
नानी ‘यो कलीयुगमा कसैको विश्वास नहुने रहेछ ।’ भन्दै त्यो काका भनाउँदोलाई गाली गर्दै भन्नुभयो । खासमा ती नानी खालि गणितमा फेल हुनेरे , ५ कक्षा मात्रै दुई चोटि दोह्याएछ । पछि गणित शिक्षक अर्थात् दिदीको काका पर्नेले म पास गरिदिन्छु , घरमा ट्युसन पढ्न आउँ भन्ने , स्कूल छुट्टि भएपछि पनि आफू एक्लै हुँदा कक्षा कोठामा बोलाउने गर्दो रहेछ ।
पछि उनी गणितमा पनि पास हुँदै गइछन् । खासमा त्यो शिक्षकले पढाउने भन्दा पनि पास गराइदिन्छु भनेर यौनक्रियाकलाप गर्दो रहेछ । भाउजू भन्दै हुनुहुन्थयो –खै नानी यस्तो क्रियाकलाप कहिले देखि थियो एकदिन पिउनले उनको आमालाई काकी छोरीको अलि ख्याल गर्नु है , गाउँभरी हल्ला भइसक्यो फेरि तपाइँ पछुताउनु होला भने पछि बल्ल आमा अलि चनाखो भएर ट्युसन पनि जान नदिएर आफै स्कूल पनि लिन जान थालिछन् तर छोरी दुई महिनासम्म पनि पर नसरेपछि तनावमा भएर मामा माइजू दुवै मेरो स्वाथ्यचौकिमा छोरीलाई लिएर आउनुभयो । उसको पिसाब चेक गर्दा र आँखा हेर्दा थाहा भयो उनी त दुईज्यानको भइसकिछन् । विचरी माइजूले मेरो खुट्टा समातेर यो कुरा कतै नभन्नु बरु के गर्ने होला भनेर छट्पटिन थाल्नुभयो । छोरीलाई तथानाम गाली गरेर मामा माइजू दुवैले विचरीलाई त्यही कुट्नुपनि भयो । डराएर केही बोल्ने अवस्थामा छैन अहिले उनी । तर यो कुरा गुपचुप राखेर काठमाडौँ जानुपर्छ भनेर हामीले यहाँ लिएर आएको ।
फिल्मको कथा जस्तो सुनिने यो घटनाले मेरो शरीर सिरिङ्ग भएको थियो । मैले सोधे “नानी कति वर्ष भइन् भाउजू ?”
‘यस्तो कुरा त बाहिर आउनुपर्छ, अपराधीलाई सजाय दिनुपर्र्यो ।’
मैले त त्यही भनेको, समाज बोलाउँ, मिडिया बोलाउँ, अदालत लिएर जाउँ, सजाय दिनुपर्छ । तर उनको आमाबुाले नै मेरो छोरी झन् बढी बदनाम हुन्छे, कसले विवाह गर्छ भोलि, त्यसपछि त यो गाउँमा हामी नबसेपनि भयो भनेर रुन थाल्नु भयो । तयही त हो गाउँमा नानी, म उहाँहरुको इमोसन बुझ्थे र अहिले बढी हल्ला गर्नु भन्दा पनि समाधान गर्नतर्फ हामी लाग्यौ र अब चाँहि के गर्नुपर्छ गाउँ गएपछि हुन्छ । त्यो यौनपिपासुलाई कहाँ यत्तिक्कै छोडिन्छ र ।
बाटामा दिदीभन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो काका पर्ने शिक्षकको चार छोरी एक छोरा छ रे । छोरा त अस्ति भर्खरै जन्मेको रे । माहिली हो कि साँहिली छोरी त त्यही नानीकै उमेरको छ रे, जुन यही काठमाडौँको एउटा बोडिङ्गमा पढाएको छ रे । एउटा छोरीको त विहे पनि भइसकेको थियो रे । के गलत के सही हो भनेर भर्खरै छुट्याउन सिक्दै गरेको एउटा बालिकालाई त्यो शिक्षकले दिने संस्कार त्यही हो ? दिदीलाई प्रश्न गरे अनि दिदीले पनि भन्नुभयो तिनीहरु गुरु होइनन् गोरु हुन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १७, २०७४, ०७:०९:१२